सुन्दै जिब्रो टोक्न लगाउने अचम्मका सेक्स रेकर्ड - Everest Dainik - News from Nepal
सुन्दै जिब्रो टोक्न लगाउने अचम्मका सेक्स रेकर्ड
चर्चित हुन मानिस के के न गर्दैनन् । चर्चाकै लागि मानिस विभिन्न खालका रेकर्ड बनाउने गर्दछन् । यस्ता कतिपय रेकर्ड त सबैजसो मानिसलाई बनाउँ बनाउँ लाग्दो हो तर कतिपय रेकर्द्यास्ता पनि हुने गरेका छन् जसबारे सुनेर मात्रै पनिमनिस जिब्रो टोक्ने गर्दछन् ।
यस्तै उदेक लाग्दो यौटा रेकर्ड यौनसम्बन्धि पनि रहेको छ । सुन्दा पत्यार रेकर्ड कतिपय अवाशामा मानिस किन बनाउँछन् होला भन्ने लागे पनि थुप्रै मानिस त्यस्तै रेकर्ड बनाएकाकरण संसारभरी चर्चामा रहने गरेका छन् ।
त्यो चाहे एकै दिनमा ९ सय १९ पुरुषसँग यौनसम्पर्क राख्ने रेकर्ड होस् या एकै ठाउँमा २ सय ५० जोडीले एकै पटक यौन सम्पर्क राखेको रेकर्ड किन नहोस । अचम्म नलाग्ने केही छैन ।
यस्ता दस एकदमै अनौठा यौन सम्बन्धि रेकर्ड यहाँ प्रस्तुत छन्:
१. विश्वमा सबैभन्दा बढी पुरुषसँग एकै पटक यौन सम्पर्क:
अमेरिकी पोर्न अभिनेत्री लीजा स्पाक्र्सले एकै दिनमा सबै भन्दा बढी पुरुष अर्थात ९ सय १९ जनासँग यौन सम्पर्क गरेको रेकर्ड बनाएकी छन् ।
यो रेकर्ड उनले सन् २००४ को आयोजना गरिएको ‘तेस्रो वाषिर्क ग्याङ्ग बैंग च्याम्पियनशी’पमा रेकर्ड बनाएकी हुन् ।
यसअघि २००२ देखि २००३ मा पहिलो तथा दोस्रो च्याम्पियनशीपमा ६ सय ४६ तथा ७ सय ५४ जनासँगको सेक्स रेकर्ड थियो ।
२. विश्वमै सबैभन्दा ठूलो लिंग:
सेक्स गर्दा लिंगको साइजको खासै महत्व हुँदैन तर ठूलो साइजको लिंगप्रति धेईको चासो भने हुने गर्दछ । तर लिंगको साइज भौगोलिक क्षेत्र अनुसार पनि फरक पर्दछ ।
अधिकांश एशियाली देशहरुमा लिंगको साइज सामान्यतः शिथिल अवस्थामा ३ इन्च हुन्छ भने अफ्रिकन देशमा ५ इन्च हुन्छ ।
तर अमेरिकाका टीभी एक्टर नोना फाल्कनको लिंगको साइज भने शिथिल अवस्थामा नै ९ इन्च तथा उत्तेजित अवस्था १३.५ इन्च रहेको छ । यो विश्वमै सबै भन्दा ठुलो आकारको लिङ्ग हो ।
यति ठुलो लिङ्गका कारण फाल्कनलाई भने पटकपटक समस्या पर्ने गरेको छ । उनले पटक पटक एयरपोर्टमा समस्या झेल्ने गरेका छन् । ठूलो लिंगले गर्दा अण्डरवेयरमा केही लुकाएको आशंकामा सुरक्षा अधिकारीहरुले कडाइपूर्वक चेक जाँच गर्ने गरेका छन् । उनको लिंग ठूलो भएकैले पोर्न इण्डष्ट्रीमा अफर आए पनि अस्वीकार गरेका छन् ।
अझ अनौठो त यो छ कि उनले आफ्नो मृत्युपश्चात आफ्नो लिंग आइसल्याण्डको लिंग संग्राहलय (पेनिस म्यूजियम)को दान दिने घोषणा गरेका छन् ।
३. सबैभन्दा ठूलो सामूहिक सेक्स आयोजना:
विश्वमै सबैभन्दा ठूलो सामुहिक सेक्स आयोजनाको रेकर्डमा जापानीको नाम रहेको छ । उक्त सामूहिक सेक्स आयेाजनामा २५० जापानी जोडीले भाग लिएका थिए ।
यो पुरै सेक्स आयोजनाको भिडियो नै बनाइएको थियो, जुन विक्रीको लागि उपलब्ध थियो । यो सामूहिक सेक्स आयोजनामा सबैले आफ्नै जोडीका साथ सेक्स गरेका थिए ।
४.सबै भन्दा वृद्ध बुवाः
सेक्स रेकर्डकै कुरा गर्दा यस्तो रेकर्डमा भारत पनि पछि परेको छैन । सबैभन्दा बढी उमेरमा बाबु बनेर एक भारतीय रेकर्ड बनाएका छन् ।
भारतको राजस्थान राज्यको विकट गाउँमा रहेका किसान नानूराम जोगीले २००७ सालमा ९० वर्षको उमेरमा आफ्नो चौथो पत्नीबाट २१ औं बच्चाको बाबु बनेका थिए ।
५. सबैभन्दा मजबुत योनीः
रुसकी ४२ वर्षीय ततिता कोज्हेवनिकोभाको नाम विश्वका सबै भन्दा मजबुत योनी भएकी महिलाको रुपमा गिनिज बुकमा दर्ता गराएकी छन् ।
उनले शारीरिक व्यायाम गरी योनी मजबुत बनाएकी हुन् । उनको योनी यति मजबुत छ कि उन्ल्र योनीद्वारा १४ किलो वजनसमेत उठाएको रेकर्ड बनाएकी छिन् ।
६. बढी उमेरकी बेश्याः
वेश्यावृत्ति संसारकै सबैभन्दा पुरानो व्यवसाय मानिदै आएको छ । संसारको प्रत्येक देशमा वैध या अवैध रुपमा वेश्यावृत्ति हुँदै आएको छ ।
यो व्यवसाय गर्ने कम उमेरको रेकर्ड यहाँ सार्वजनिक गर्नु उचित छैन । तर ताइवानको राजधानी ताइपेइमा एक ८२ वर्षकी वृद्धा यस्तो पेशा अपनाएर बढी उमेरकी बेश्याको रेकर्ड बनाएकी छन् ।
उनलाई हजुरआमाको नामले चिनिने गरिएको छ । उनका अनुसार ४० वर्षअघि आफ्नो पतिको मृत्युपछि यौन ब्यवसाय गर्न थालेकी हुन् ।
७. सबैभन्दा बढी दूरीसम्म विर्य स्खलनः
होस्र्ट स्कुल्ट्जको नामका व्यक्तिको नाममा सबै भन्दा बढी दूरी सम्म विर्य खसाल्न सक्ने रेकर्ड रहेको छ ।
उनले १८ फिट ९ इन्च टाढा, १२ फिट ४ इन्च उचाईसम्म र सबैभन्दा द्रुत गतिमा अर्थात ४२.७ माइल प्रतिघण्टाको गतिमा वीर्य खसालेको रेकर्ड रहेको छ ।
८. लामो समयसम्म हस्तमैथुनः
जापानको मसानोबु सातोको नाम सवै भन्दा लामो समयसम्म हस्तमैथुन गर्ने ब्यक्तिका रुपमा रेकर्ड भएको छ ।
उनले सन् २००९ मा सेन फ्रन्सिस्कोमा आयोजित विश्व हस्तमैथुन प्रतियोगितामा ९ घण्टा ५८ मिनेटसम्म हस्तमैथुनको रेकर्ड कायम गरेका हुन् ।
यसअघि ९ घण्टा ३३ मिनेट सम्म हस्तमैथुन गरेको रेकर्ड मसानोबुले नै बनाएका थिए । मसानोबु सातो जापानमा सेक्स टोयज बनाउने कम्पनीका लागि विज्ञापन गर्दछन् ।
९. धेरै बच्चा जन्माएकी आमाः
१७ औं शताब्दीमा रुसकी भेलेटिना भसिलयेभलाई विश्वमा सबैभन्दा बढी छोराछोरी जन्माउने आमाको गौरव प्राप्त छ । उनले आफ्नो जीवनकालमा ६९ बच्चा जन्माएकी थिइन् ।
उनले कहिले पनि एउटा मात्रै बच्चा जन्माइनन् । उनी २७ पटक सुत्केरी हुँदा ६९ बच्चा जन्माएकी हुन् । उनले १६ पटक जुम्लयाहा, ७ पटक तिम्ल्याहा तथा चार पटक चार/चार बच्चाको जन्म दिएकी थिइन् ।
आधुनिक कालमा यो रेकर्ड चिलीकी लाटिना अल्बिनाको नाममा रहेको छ । उनले ६४ बच्चा जन्माएको दावी गरेकी छन् । आधिकारिक रुपमा भने अहिले उनले ५५ बच्चा जन्माएको मात्रै रेकर्ड छ ।
१०. सबैभन्दा ठूलो योनीः
सवै भन्दा ठूलो लिंगको रेकर्ड जस्तै सवैभन्दा ठूलो योनीको पनि विश्व रेकर्ड रहेको छ । स्कटल्याण्डकी अन्ना स्वानले सवैभन्दा ठूलो योनी भएको महिलाको नाममा रेकर्ड राखेकी छन् ।
सन् १८४६ मा जन्मिएकी स्वानले १८८८ सालमा यो रेकर्ड बनाएकी हुन् । उनको योनीको लम्बाई १९ इन्च थियो । उनको सवै भन्दा अग्ली महिलाको रुपमा अर्को पनि रेकर्ड छ । उनको १९ वर्षको उमेरमा ७ फिट ८ इन्च उचाइ थियो । १८७७ मा उनले ७ फिट उचाईका क्याप्टेन बटेरको साथ उनको विवाह भएको थियो ।
उनले सबैभन्दा ठूलो र बढी तौलको बच्चा जन्माएकी थिइन् । उनले जन्माएको बच्चाको लम्बाई ३४ इन्च तथा तौल १२ केजी थियो । तर यो बच्चा भने जीवित छैन । यो बच्चाको प्रतिमा अहिले पनि क्लीभल्याण्ड म्युजियम अफ हेल्थमा राखिएको छ ।
ट्याग्स: SEX RECORD